MANODIDINA AN’I MBOLA RAJAONAH
Manomboka mipitika any amin’ny manodidina an’i Mbola Rajaonah ny ra.
Vinavinaina amin`ny telo volana voalohany ny taona 2020 no ho vita tanteraka ny fanamboarana satria ny 60%-n’ny asa no efa vita ny mahakasika ny fanitarana ny seranam-piaramanidina.Hahazaka mpandeha 1 taitrisa isan-taona ny eny Ivato rehefa vita ny asa rehetra ary hitovy amin’ireo seranam-piaramanidina moderna maneran-tany.96 tapitrisa euros no tetibidin’ny fanitarana.Nitsidika ilay lalana mirefy 11 km mampitohy an’i Tsarasaotra amin’Ivato ihany koa ny filoha ka nanome toromarika fa atao manara-penitra tsara io lalana io.
Tena tsy voafehy intsony ny asan-dahalo any ambanivolo ary lasa ny samy sivily no mifampitifitra vokatr’izany. Toa izay nitranga tao Morafenobe, nalain’ny dahalo an-keriny ny tompon’omby ary noteren’ireo hitondra azy eny amin’ny valabe izay feno biby fiompy. Nisy nampandre anefa ny andrimasom-pokonolona ary dia nanao ny fanarahan-dia avy hatrany. Vao nifanena dia raikitra ny fifampitifirana, moa va tsy toa ireny any amin’ny horonan-tsary western ireny ny iainana any amin’ny faritra lavitra an’Antananarivo ankehitriny ?
KAROHANA FATRATRA I STEEVE